UMnyango nobugcwenti - Shijiazhuang Yiling Isibhedlela
esibhedlela Chinese Yiling kuyinto eliphakeme esibhedlela China oluyimfihlo imithi yamaShayina. I uchwepheshe ithimba eliqinile esibhedlela yakhiwa 29 academicians Chinese Academy of Sciences, futhi iziqu kanye nochwepheshe kwezilwandle ukubuyela. Inhlanganisela yokwelapha yamaShayina naseNtshonalanga has Izindlela zokwelapha ezihlukile nemiphumela zokwelapha ekwelapheni izifo ezivamile ahlukahlukene, izifo kanye nezifo ezinzima.
Ikakhulukazi amakhono abalulekile China futhi Hebei Isifundazwe, ezifana umnyango imisipha yoma, umnyango isifo rheumatism, umnyango sikashukela, umnyango nephrotic, umnyango isimila kanye neminye iminyango, ekwelapheni umgogodla yoma kwemisipha, motor neuron isifo, scleroderma, fibromyalgia, rheumatism, isifo sikashukela, isifo sezinso, zonke izinhlobo umdlavuza nezinye izifo zisobala.
ukwelashwa okuphumelelayo kanye usizo iziguli angaphandle abasuka emazweni angaphezu kwangu-20 kanye nezifunda emhlabeni. Ukuze ukwelashwa isifo, sicela usishiyele umlayezo noma xhumana nochwepheshe.